Toyota - Toyota Harrier 2014 Head Lamp Grille Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင?? - Myanmar Car Search Engine
Toyota Harrier 2014 Head Lamp Grille Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ္စည်း , 4WD & SUV ကားအလှဆင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ရောင်းဝယ် ရေး နယ်orderများအတွက် ကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်မှာယူလိုပါက - 0973084018 , 09425314836 ............................ ဝယ်ယူအားပေးသောမိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား Nihon Auto မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Hot Line - 0973084018 ဆိုင်လိပ်စာ - အမှတ် ၄၆,ဗညားဒလလမ်း,မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ Office Ph : 09 425314836
◄ ရှေ့သို့ ◄: Toyota FJ Cruiser Side Mirror Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ?
နောက်သို့ ►: Toyota Crown 2008 Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ္စည်း ►
Toyota Corolla (တိုရိုတာ ကော်ရိုလာ)
မျိုးဆက် ၁၁ ဆက် ရှိ
Eleventh generation (2012–present)
အင်ဂျင် ၈ စား လာ
Approximate kerb weight kg
Gross vehicle mass 1715 kg
Approximate tare weight 1715 kg
Gross trailer weight braked 1300 kg
Gross trailer weight unbraked 450 kg
July 2013 မှာ သန်း(၄၀) ထိ ရောင်းရပါသည်။